29 Jan 2020 | बुधबार, १५ माघ, २०७६ | Edition : Nepal | UK | Australia
इङ्ल्यान्डको दक्षिणपश्चिम स्वीन्डोनमा रहेको प्लान्ट होन्डाको युरोपेली युनियनमा रहेको एक मात्र प्लान्ट हो । यो प्लान्टबाट होन्डाको “सिभिक” मोडेलको कार विगत २४ वर्षदेखि उत्पादन हुँदै आएको थियो । यस प्लान्टबाट वार्षिक करिब एक लाख ५० हजार कार उत्पादन हुने गर्दछन् ।
यो प्लान्ट सन् २०२१ देखि पूर्ण रुपमा बन्द हुनेछ, होन्डाले घोषणा गरेको छ ।
युरोपेली क्षेत्रका प्रमुख अधिकृत काट्सुसी इनोउले एक विज्ञप्ति जारी गरी कम्पनीको यो निर्णय निकै कष्टपूर्ण रहेको बताएका छन् ।
गत वर्ष होन्डाका युरोपेली वरिष्ट उपाध्यक्ष इयान हावेल्सले बिना सम्झौता युरोपेली युनियनबाट बेलायतको बहिर्गमन भएमा त्यसले कम्पनीलाई करोडौं पाउन्ड घाटा हुने बताएका थिए।
एजेन्सी । स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडका सफल प्रशिक्षक जिनेदिन जिदान चाँडै फ्रान्सका प्रशिक्षक बन्ने चर्चा छ । अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा प्रकाशित समाचार अनुसार उनले जारी सिजनको अन्त्यसँगै रियल छोडेर फ्रान्
बलिउडका ९ चर्चित झापडकाण्डहरुः सलमान खानले पनि खाएका अपरिचित युवतीको झापड
एजेन्सी । बलिउडका केही यस्ता सेलिब्रिटीहरु रहेका छन् जो चर्चामा आउनका लागि बेलाबेलामा आश्चर्यलाग्दा पब्लिसिटी गरिरहन्छन् । कोही भने आफ्नो रिस सम्हाल्न नसक्दा यस्ता हर्कतहरु गर्ने गर्छन् । कतिपय आफ्नो
तौल छिटो घटाउने सबैभन्दा उत्तम तरिका !
एजेन्सी । धेरै मानिसहरुले आफ्नो मोटोपनबाट छुटकारा पाउनको लागि धेरै तरिका अपनाउछन् तर सफल हासिल गर्न असफल रहन्छन् । तर खानपानमा ध्यान दिने र नियमित ब्यायम गर्ने हो भने सजिलै तौल घटाउन सकिन्छ ।
रक्तदान गर्नु अगाडि निम्न कुरामा ध्यान दिनुपर्छ
यस्तो रहेको छ मंगलबारको तपाईको भाग्य, माघ १४ गते
यदी श्रीमतीले छोडे अर्को विवाह फ्रिमा गराइदिने म्यारिज व्युरो !
एजेन्सी । कोही पनि मानिस आफ्नी श्रीमतीले आफुलाई नछोडोस् भन्ने चाहान्छ । यदी आफुलाई छोडेर पत्नी अरु कुनै पर–पुरुषसँग जान्छिन् भने त्यो समय निकै पिडादायी हुन्छ । यसका कारण इज्जतमा पनि ठुलो दाग लाग्ने र मानसिक तनाब हुने गर्छ ।
किशोरीको पेटबाट आधा किलो कपाल र खाली श्याम्पुको खोल निकालेपछि...
एक सेकेन्डबारे १० रोचक कुरा